အကောင်းဆုံး Biodegradable Coating ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် Biodegradable Coating စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
SHANG SHIEN CHENG INDUSTRY CO., LTD. အဓိကထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်အတွက်အထူးပြု Biodegradable Coating။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ OEM / နှစ်ဖွဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်စာနာန်ဆောင်မှုမှအကျိုးခံစားရဖို့, today.We စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဖန်တီးရန်နှင့် client အားလုံးနှင့်အတူအောင်မြင်မှုမျှဝေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ပိုပြီးစတိုင်များကျေးဇူးပြုပြီးချင်တယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အခုချက်ချင်း!
ပုံစံ - PLA Single use -06
၁၀၀%biocompostable PLA ထုတ်ကုန်-စက္ကူခွက်အပေါ်ယံပိုင်း
ယခုခေတ်,လူတွေကခွက်ကိုယူသွားပြီးတစ်နှစ်ကိုစက္ကူခွက်သန်းရာချီလောင်တယ်.စက္ကူခွက်၏အတွင်းဆုံးအလွှာသည် PE film ကိုသုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်,စက္ကူခွက်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်ခက်ခဲစေသည့်အပြင်,၎င်းသည် စား၍ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သောအဆိပ်ဖြစ်စေသောပစ္စည်းများကိုလည်းထုတ်လုပ်သည်.
အကောင်းဆုံး Biodegradable Coating ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။